Ivontoerana fanavaozana fizahan-tany voalohany any Amerika: eken'ny UNWTO ary eken'ny
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'ny dia momba an'i Paraguay » Ivontoerana fanavaozana fizahan-tany voalohany any Amerika: eken'ny UNWTO ary eken'ny
Aprily 13, 2018
Ny kintana farany amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany manerantany ankehitriny dia avy any Jamaika ary tsy misy hafa Edmund Bartlett, minisitry ny fizahantany any Jamaika. Ny Security sy ny fizahantany fizahan-tany dia avo lenta tamin'ny fandaharam-potoana raha The Hon. Edmund Bartlett dia nanao ny famelabelarany nandritra ny fotoana nitohy Kaomisionam-paritra UNWTO faha-63 ho an'ny Amerika ary ny Seminera iraisam-pirenena momba ny fanomezana hery ny vehivavy amin'ny sehatry ny fizahantany any Paraguay. Ny Konferansa UNWTO dia tanterahina miaraka amin'ny Sekretariam-pirenena momba ny fizahantany any Paraguay (SENATUR).
Ezaka tsy nisy fitsaharana no napetraky ny sekretera jeneralin'ny UNWTO teo aloha Taleb Rifai niaraka tamin'ny minisitra Bartlett, ary ny sehatra dia napetraka tamin'ny volana novambra lasa teo niaraka tamin'ny fanambarana Montego Bay taorian'ny famaranana ny Konferansa UWWTO eran-tany momba ny asa sy ny fitomboana lehibe ao Jamaika. Ny minisitra Jamaica no nampiantrano ny hetsika.
Ny fanambarana Montego Bay dia nanasongadina ny filàna fanalefahana ny fiovaovan'ny toetr'andro sy fanatsarana ny fiomanana amin'ny krizy, ao anatin'izany ny fanoloran-tena eo amin'ireo firenena Karaiba hiasa amin'ny fampidirana faritra bebe kokoa ary hanohana ny Global Resilience Center ao Jamaika, ao anatin'izany ny Sustainable Tourism Observatory hanampy amin'ny fahavonona, fitantanana , ary ny fanarenana amin'ny krizy.
Androany maraina tao amin'ny fivorian'ny komisiona rezionaly ho an'ny amerikana, ny minisitra Bartlett dia nanao ny famelabelarany momba ny fametrahana sy fampiantranoana ny Ivontoerana fanavaozana fizahan-tany voalohany any Amerika. Konferansa voalohany no kasaina hatao any Montego Bay amin'ny taona 2019.
Ny sekretera jeneralin'ny UNWTO amin'izao fotoana izao Zurab Pololikashvil dia nanohy nanonona ny fanohanan'ny UNWTO ny ivon-toerana iray.
Ity misy kopia iray an'ny presentation nataon'ny minisitry ny Jamaika androany ary nankatoavin'ny Vaomieram-paritry ny Amerikana ao amin'ny UNWO ankehitriny
BACKGROUND SY JUSTIFICATION
Tao anatin'ny roapolo taona lasa, toerana maro manerantany no niatrika fandrahonana ivelany sy fanamby anatiny (fanakorontanana), izay manimba ny fahafahan'izy ireo mahatratra ny tanjony sy ny tanjony. Anisan'izany fanakorontanana izany, ankoatry ny zavatra hafa, ny fiovan'ny toetr'andro sy ny loza voajanahary, ny heloka bevava amin'ny cyber sy ny cyber-security, ny valanaretina sy ny areti-mifindra, ary koa ny fampihorohoroana sy ny ady..
Epidemika sy Pandemika
Ny fandrahonana ny valanaretina sy ny areti-mifindra dia zava-misy eo amin'ny fizahan-tany hatrany noho ny toetoetran'io sehatra io izay misy ny dia iraisam-pirenena sy ny fifandraisana akaiky eo amin'ny olona an-tapitrisany. Ny fandrahonana kosa dia nanjary nazava kokoa tao anatin'ny roapolo taona lasa.
Izao tontolo izao ankehitriny dia mifamatotra amin'ny volan'ny ankehitriny, ny hafainganana ary ny fivezivezena amin'ny dia mbola tsy nisy toy izany. Fitsangatsanganana efa ho 4 miliara no nentin'ny rivotra tamin'ny taon-dasa fotsiny. Ny fandrahonana ny valanaretina sy ny areti-mifindra dia miitatra mihoatra ny sehatry ny fizahan-tany ary mbola loza mitatao ho an'ny fahasalamana sy ny fiarovana ny olombelona. Izany dia nanery ny Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) hanambara fa ny pandemika dia olan'ny fiarovana manerantany ary ho avy ny Shock Global; manao antso avo amin'ireo firenena hanolo-tena amin'ny laharam-pahamehana amin'ny resaka politika sy teti-bola ho an'ny pandemika mba hampiroboroboana ny filaminan'ny olombelona amin'ny fomba mitovy amin'ny fandaniana sy ny fandaniana amin'ny miaramila, ohatra, dia atao laharam-pahamehana mba hampiroboroboana ny filaminam-panjakana.
Ny tatitra iray nataon'ny Banky Iraisam-pirenena tamin'ny 2008 dia nampitandrina fa ny areti-mandringana manerantany izay maharitra herintaona dia mety miteraka fitotonganana lehibe manerantany ary nanatsoaka hevitra fa ny fatiantoka ara-toekarena dia tsy avy amin'ny aretina na fahafatesana fa avy amin'ilay antsoin'ny Banky Iraisampirenena hoe "ezaka hisorohana ny aretina": mampihena ny dia an-habakabaka, misoroka ny fandehanana any amin'ny toerana misy ny otrikaretina ary mampihena ny fanjifana serivisy toy ny fisakafoanana fisakafoanana, fizahan-tany, fitaterana betsaka ary fivarotana antsinjarany tsy ilaina.
Fiovan'ny toetrandro sy ny loza voajanahary
Ny fiovan'ny toetrandro izao no loza mitatao indrindra atrehan'ny sehatry ny fizahan-tany sy ny faritra Karaiba midadasika. Ny mari-pana mafana dia mampiakatra ny haavon'ny ranomasina ary mamokatra vanim-potoana rivodoza lava miaraka amin'ny tafiotra mahery sy mahery. Ny haintany mahery kokoa dia ny fanamaina ny loharanon-drano, ny zavamaniry.
ary ny vokatry ny fambolena. Ny fiakaran'ny ranomasina koa dia manimba ny morontsiraka, fasika, ala honko ary morontsiraka mando. Vao tamin'ny taon-dasa ny fandalovan'ny rivodoza Irma sy Maria dia nitondra fahavoazana lehibe tamin'ny firenena 13 miankina indrindra amin'ny fizahan-tany ao amin'ny faritra toa an'i St. Martin, Anguilla, Dominica, Barbuda, St.Barts, The British Virgin Islands, The US Virgin Islands, Turks & Caicos, Dominikanina ary Puerto Rico. Ny faritany sasany dia niaina fahasimban'ny 90% n'ny fotodrafitrasa fanaovan-dry zareo.
Ny vinavinan'ny vinavina dia milaza fa ny vidin'ny tsy fandraisana andraikitra any Karaiba dia hahatratra 22% ny harin-karena faobe amin'ny 2100 sy 75% ny harin-karena faobe amin'ireo toe-karena mora tohina kokoa. Izany dia miteraka olana amin'ny hoavin'ny toekarena Karaiba raha tsy miova ny hamafin'ny fiovan'ny toetr'andro.
Fampihorohoroana sy ady
Na dia mbola tsy niatrika fampihorohoroana mahery vaika aza i Jamaika dia miasa amin'ny fomba vaovao isika izao ka tokony hiomana amin'ny tranga mety hitranga. Ny fanafihan'ny mpampihorohoro tato ho ato any amin'ny toeran'ireo mpizahatany toa an'i Barcelona, ​​Paris, Nice, Tunisia, Egypt, Bohol any Filipina, Torkia, Las Vegas, Florida ary Bali any Indonezia ary Algeria dia nampiseho fa tsy misy toerana azo antoka amin'ny fanafihana fampihorohoroana. Mihabetsaka hatrany, ireo singa mahery vaika miteraka fampihorohoroana manerantany dia nanjary niparitaka ara-jeografika ary nanangona mpikambana manerana an'izao tontolo izao.
Ny filaminan'ny tanjona dia tokony ho lasa laharam-pahamehana maika ho an'ireo mpilalao fizahan-tany manerantany. Ny fampihorohoroana mahery vaika dia mety hiteraka fahavoazana lehibe eo amin'ny fahasarotan-toerana, hanodinana ireo làlana mankany amin'ireo toerana voakasik'izany, hanimba ny fivezivezena amin'ny ho avy ary hanakorontana ny harinkarem-pirenena.
Heloka bevava amin'ny cyber sy cyber
Ary farany, miasa ao amin'ny tontolo nomerika iray isika ankehitriny, rehefa terena hiaro ny mpitsidika sy ny olom-pirenena amin'ny fandrahonana azo tsapain-tanana sy tsy azo tsapain-tanana. Ny habaka nomerika dia nanjary tsenan'ny indostrian'ny fizahantany. Fikarohana fikarohana, famandrihana, famandrihana, serivisy ho an'ny efitrano ary fiantsenana fialantsasatra no atao an-tserasera amin'ny alàlan'ny fandoavam-bola amin'ny carte de crédit. Ny fiarovana dia tsy midika hoe miaro ny mpizahatany amin'ny fandrahonana ara-batana intsony fa koa miaro ny olona amin'ny fandrahonana amin'ny cyber (hosoka amin'ny Internet, fangalarana ny maha-izy, sns.) Marina ihany anefa fa ny ankamaroan'ny toerana fizahan-tany any amin'ny faritra dia tsy manana drafitra fandefasana raha misy fanafihana cyber.
Na dia natanjaka tokoa aza ny sehatry ny fizahan-tany tamin'ny fomba nentim-paharazana, ny sehatra dia iray amin'ireo marefo indrindra amin'ireo fanakorontanana ireo ihany koa. Tao anatin'izay roapolo taona lasa izay, fikambanana maromaro ihany koa no nanandrana namaha ny sasany amin'ireo ahiahy ireo, na izany aza tsy misy fikambanana iray hanome vahaolana ara-stratejika sy fifandraisana amin'ny asa. Ny tsy fisian'ny orinasa toy izany dia manimba ny fahafahan'ny tanjon'ny toerana manerantany hampitombo ny fizahan-tany ataon'izy ireo. Tsy isalasalana fa misy fiantraikany lehibe kokoa amin'ny fanatratrarana ny tanjon'ny Tanjona fampandrosoana maharitra. Ny fiantohana ny fahaizan'ity sehatra ity dia manan-danja amin'ny fiarovana sy fampiroboroboana ny fiadanan'ny olom-pirenena an-tapitrisany manerantany.
Ny ivon-toerana manerantany momba ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany sy ny fitantanana krizy dia nantsoina hiasa amin'ny sehatra manerantany izay tsy ny fanamby vaovao ihany no miavaka, fa koa ny fotoana vaovao hanatsarana ny vokatra fizahan-tany ary hiantohana ny faharetan'ny fizahantany manerantany.. Ity ivon-toerana ity dia maneho ny fanantenana sy ny fitohizan'ny fizahantany ho vokatra eo an-toerana sy isam-paritra ary ho orinasa manerantany.
2. Tanjona ao amin'ny foibe
Ny tanjona voalaza etsy ambony dia ho tratra amin'ireto tanjona manaraka ireto:
1. Fananganana sy fananganana fahaiza-manao
a. Manomeza vaovao ara-potoana sy marina mifandraika amin'ny fikorontanana / loza mety hitranga / mety hitranga amin'ny toeran-kaleha;
b. Manomeza fanampiana, varotra ary fanampiana amin'ny marika amin'ny toeran-tany iharan'ny fikorontanana / loza, ho amin'ny fanarenana haingana;
c. Omeo fampahalalana momba ny raharaham-pitsikilovana sy angona data ho any amin'ny toerana itodiana;
e. Manome vahaolana politika amin'ny governemanta, fikambanana iraisam-pirenena, fiarahamonim-pirenena ary orinasa mifandraika amin'ny faharetan'ny fizahan-tany; ary
f. Manaova fikarohana farany mifandraika amin'ny fikorontanana ankehitriny sy mety hitranga na loza mety hitranga any amin'ny toerana itodiana ary hamolavola paikady fanalefahana hamahana ireo korontana sy risika ireo.
a. Manome vahaolana politika amin'ny governemanta, fikambanana iraisam-pirenena, fiarahamonim-pirenena ary orinasa mifandraika amin'ny faharetan'ny fizahan-tany.
b. Fikambanana iraisam-pirenena lobo sy ny mpandray anjara rehetra mba ho lasa anjakan'ny tontolon'ny fizahan-tany amin'ny fitantanana fizahan-tany sy ny fitantanana krizy.
c. Ny famatsiam-bola loharano sy / na ny fivelarana amin'ny fampivoarana hanatsarana ny kalitaon'ny vokatra ateraky ny ivontoerana fanofanana hotely isam-paritra toa ny HEART ao Jamaika. Hatao hiantohana ny tontolon'ny fizahan-tany amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny kalitaon'ny marika. Iray amin'ireo fandrahonana lehibe hanoherana ny fizahan-tany ny fizahan-tany dia ny kalitaon'ny kapitalin'ny zanak'olombelona ao anatin'io sehatra io.
e. Hamarino fa manaja ny zava-bitan'izy ireo ny fikambanana amin'ny alàlan'ny fampiharana fomba stratejika amin'ny fisoloana vava.
3. Fitantanana ny tetikasa / programa
a. Manomana sy mampihatra ny rafi-pitantanana krizy izay hampihena ny fiantraikan'ny loza;
b. Ampio ny ezaka fanarenana ireo firenena tratry ny voina;
c. Araho maso ny ezaka fanarenana ataon'ny firenena tratry ny krizy;
e. Manaova fikarohana mivaingana mifandraika amin'ny fikorontanana ankehitriny sy mety hitranga na loza mety hitranga any amin'ny toerana itodiana ary hamolavola paikady fanalefahana hamahana ireo korontana sy risika ireo;
f. Manome fiofanana sy fanamafisana ny fahaiza-manao amin'ny fahaizan'ny fizahan-tany sy ny fitantanana krizy;
f. Manofana sy manangana ny fahafahan'ny mpikambana ao amin'ireto sehatra manaraka ireto:
II. Mpanadihady momba ny krizy sy ny risika
III. Manam-pahaizana momba ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany
IV. Mpisolovava amin'ny faharetana amin'ny fizahan-tany
v. Ny Ivotoerana dia hanome ihany koa (1) vahana fiaraha-miombon'antoka fikarohana ho an'ireo olona mikasa hanitatra ny fahalalany na hahazo traikefa amin'ny fahaizan'ny fizahan-tany sy ny fitantanana krizy amin'ny alàlan'ny fikarohana postdoctoral, ary (2) fiofanana ho an'ny mpianatra mianatra sy mpianatra nahazo diplaoma amin'ny sehatry ny fianarana mifandraika amin'ny faharetan'ny fizahan-tany sy ny fitantanana krizy;
h. Manome vahaolana politika amin'ny governemanta, fikambanana iraisam-pirenena, fiarahamonim-pirenena ary orinasa mifandraika amin'ny faharetan'ny fizahan-tany;
h. Ny forum momba ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany sy ny fizahana krizy, ny kaonferansa ary ny fifanakalozan-kevitra ampahibemaso dia natokana hitondrana ireo manampahaizana sy manam-pahaizana hizara fahalalana sy paikady momba ny fomba hahay hiatrika toe-javatra bebe kokoa sy hahomby amin'ny fitantanana risika.
4. Fitaovana fanaraha-maso sy fanombanana
Ny Ivotoerana koa dia hanome serivisy fanaraha-maso sy fanombanana amin'ny alàlan'ny vondrona fanaraha-maso sy fanombanana. Ity singa ity dia tompon'andraikitra voalohany amin'ny fanaraha-maso tsy an-kiato ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny sehatry ny fizahantany. Ho tompon'andraikitra amin'ny fanaraha-maso ny sehatry ny fizahantany manerantany sy isam-paritra ity singa ity amin'ny ezaka hamantarana ireo olana toa kely kokoa izay mety hiteraka kilema amin'ny indostria ary koa ireo olana tsy ampoizina izay tsy dia misy sain'ny manam-pahaizana. Izany dia mahatonga ny sehatra hatanjaka kokoa amin'ny fanomezana vinavina sy fahitana mialoha. Ity unit ity noho izany dia hiasa toy ny tilikambo fiambenana na jiro fanazavana fizahan-tany manerantany.
Ny tanjon'ny fanaraha-maso an'ity singa ity dia hiompana amin'ny fampiofanana ny olona handray anjara amin'ny fihaonambe fizahan-tany toy ny fihaonamben'ny UNWTO natao tao Montego Bay tato ho ato, seminera sy fifanakalozan-kevitra momba ny fizahan-tany ary koa hanarahana ireo hetsika, hetsika, politika ary fanoloran-tena rehetra. mpandray anjara amin'ny sehatry ny fizahantany. Ity singa ity dia hametraka tahiry manerantany momba ireo tetikasa na hetsika natolotray, natao ary notohizan'ireto mpandray anjara rehetra ireto - lisitra iray momba ny fizahan-tany eran-tany. Amin'ny fanaovana izany, ny Ivotoerana dia afaka misolo vava kokoa sy manararaotra ny mpandray anjara amin'ny alàlan'ny fampahatsiahivana azy ireo ny amin'ny fahavononany ary koa hanome vaovao ho an'ireo olona liana na fikambanana liana. Izany dia hanampy amin'ny fampivoarana ny hetsika fizahan-tany manerantany ary koa hamoronana fahatsapana fitoviana amin'ny hetsika fizahan-tany manerantany.
Ny lafiny Fanaraha-maso sy fanombanana ny Ivotoerana koa dia miendrika Virtual Tour Observatory. Mitovy amin'ny an'ny Observatory an'ny Vondrona Eropeana, io mpandinika io.
mikendry ny hanohana ireo mpanao politika sy ny orinasa hamolavola paikady tsara kokoa ho an'ny sehatry ny fizahan-tany manerantany.
Ny Virtual Tour Observatory dia hanome fidirana amina fanangonana vaovao, data ary fanadihadiana amin'ny fironana ankehitriny eo amin'ny sehatry ny fizahantany. Ny Observatory dia ho azo ampiasaina amin'ny alàlan'ny olona rehetra izay liana amin'ny angon-drakitra momba ny fizahan-tany amin'ny firenena / faritra rehetra. Ity observatory ity dia hanatsara ny vatsim-pianarana amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo tarehimarika farany azo jerena amin'ny fironana sy ny volany, ny fiatraikany ara-toekarena sy ny tontolo iainana ary ny fiaviany sy ny mombamomba ireo mpizahatany. Hiara-miasa amin'ny fikambanana hafa mitovy amin'izany manerantany ny mpandinika.
Ity observatory ity dia ahitana ireto fampahalalana / data manaraka ireto:
 Tondro fizahan-tany momba ny fizahan-tany.
 Antontan'isa momba ny fizahan-tany miaraka amina fampiasa manipulative friendly-friendly sy interactive izay ahafahan'ny mpampiasa miditra amin'ny kisary sy ny tabilao, ary ny manodinkodina ny angon-drakitra mba hamoahana ny fepetra tendrena afovoany sy ny famakafakana bivariate kely.
 Fandalinana sy tatitra avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao izay misy ifandraisany amin'ny fizahan-tany.
 Torohevitra momba ny dia ho an'ny faritra rehetra.
 Toerana mafana sy fizahan-tany tsara indrindra ho an'ny faritra rehetra.
3. FITORIANA NY FITONDRANA ARA-PIVAVAHAN'NY CENTRE
Ny Ivotoerana dia hiarahan'ny manam-pahaizana sy matihanina ekena iraisam-pirenena amin'ny sehatry ny fitantanana ny toetr'andro, fitantanana tetikasa, fitantanana fizahan-tany, fitantanana risika fizahantany, fitantanana krizy fizahan-tany, fitantanana serasera, varotra fizahan-tany sy marika ary koa fanaraha-maso sy fanombanana.
 Ny foibe dia hotarihin'ny Tale iray izay tompon'andraikitra amin'ny fitantanana ankapobeny ny Ivotoerana sy amin'ny fanomezana ny fitarihana, ny fandaminana ary ny lalam-pahefana eo amin'ny foibe..
 Biraon'ny programa telo (3) no hanampy ny Tale.
o Biraon'ny programa - Advocacy
o Mpitantana ny programa - Fananganana fikarohana sy fananganana fahaiza-manao
o Mpitantana ny programa - Tetikasa
o Mpiandraikitra fanaraha-maso sy fanombanana
 Ny Tale sy ny tompon'andraikitra amin'ny programa dia ho anisan'ny filankevi-pitantanana. Ny sisa amin'ny birao dia asaina hiasa araka ny tolo-kevitra avy amin'ny minisiteran'ny fizahantany, ny oniversiten'i india andrefana ary ireo vondrona mpiray antoka hafa.
 Ny birao dia hanampy ny mpikaroka, ny mpandinika ny krizy ary ny fitantanana risika, ny manam-pahaizana momba ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany ary ny mpiaro ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany izay hiasa hahatratra ny tanjon'ny Ivotoerana.
Ny Ivotoerana dia hipetraka ao amin'ny The University of the West Indies, Mona Campus (UWI). Ny Campus dia misy toerana roa any Jamaika - Montego Bay sy Kingston. Niorina tamin'ny 1948, ny University of the West Indies dia andrim-pianarana ambony manerantany, nahazo alalana amin'ny fikarohana sy fampandrosoana natao hanohanana ny fitomboana ara-tsosialy sy toekarena ao amin'ny faritr'i Karaiba.
Ny oniversite dia manana iraka hampandroso ny fahalalana, hamorona fahalalana ary hikolokolo fanavaozana ho an'ny fanovana tsara an'i Karaiba sy ny tany midadasika. Ity iraky ny oniversite ity dia mifanentana tanteraka amin'ny tanjona kendrena amin'ity institiota ity satria manome sehatra iray, amin'ny alàlan'ity ivon-toeran'ny hatsarana ity, hampandrosoana ny adidin'ny oniversite amin'ny fampiroboroboana ny fanavaozana sy ny fanovana tsara amin'ny alàlan'ny fahaizan'ny fizahan-tany sy ny fampandrosoana..
Ny maha oniversite ny sasany amin'ireo saina, manam-pahaizana ary mpikaroka faran'izay mamirapiratra manerana ny faritra sy ny faritra hafa, dia hipetraka araka ny tokony ho izy ny Oniversite manome dobo voajanahary sy vonona ny
loharanom-pahalalana izay ahafahan'ny Ivotoerana miditra amin'ny loharanon'olombelona tena tsara hanakanana ny ezak'izy ireo. Ny UWI koa dia manome tontolo iainana ho an'ny fiaraha-miasa eo anelanelan'ny sy ireo efa voaorina
ary mandrindra institiota iraisam-pirenena amin'ny fizarana fahalalana, paikady ary fahaizana manatratra ny tanjona faratampon'ny Ivotoerana. Mirehareha ny oniversite a 8 | P taona
lazan'izao tontolo izao izay hanatsara ny fahatokisan'ny Ivotoerana amin'ny endrika symbiotika satria ny Ivotoerana dia hampivoatra ny iraka sy ny vinan'ny oniversite amin'ny ankapobeny..
5. Dingana manaraka
Niorina tao amin'ny University of the West Indies Mona Campus ny Center. Izahay izao dia eo an-dàlam-pandaminana ny mpiasa ao amin'ny Ivotoerana ary koa ny fananganana fiaraha-miasa amin'ny fampandrosoana ny mombamomba ny tetikasanay. Hatreto dia nahavita nifandray tamin'ireto orinasa ireto izahay:
 Oniversite Bournemouth, Angletera
 Karnavaly Cruise Line
 The University of Queensland, Aostralia
Eo am-pandinihana ireto tetikasa manerantany momba ny hetsika toetr'andro ireto koa izahay:
1. Fampitahana fampitahana manerantany izay manadihady ny fihetsiky ny mpizahatany manoloana ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fiovan'ny toetrandro rehefa mandeha.
2. Fampitahana fampitahana manerantany izay mijery ny fihetsika manoloana ny fiovan'ny toetrandro.
3. Fandinihana nasionaly mandinika ny paikadin'ny faharetana sy ny fampifanarahana ho setrin'ny fiovan'ny toetr'andro.
4. Fisoratana anarana.
6. Fihaonana an-tampony - Sabotsy 22 septambra 2018.
Hamburg dia “vahinin'ny voninahitra” amin'ny hetsika fiaramanidina manandanja indrindra any Canada
Mitondra fehikibo eo am-pandehanana any? Alika mpangarom-po FRAPORT no mivovo tsia!